Scan Nepal Being the Antivirus.: भरतपुर काण्डमा सर्वाेच्चकाे फैसला, कतै निराशा त कतै हाैसला ।
.......a campaign to scan Nepal, the country of MT.EVEREST and LORD BUDDHA, and make itacomplete virus free country where we can't find any kind of hegemony.......
चितवनकाे भरतपुरमा मतगणनाका क्रममा जनताकाे मतकाे अवमुल्यन गर्दै केहि मतपत्रहरू च्यातिए। त्यसपछि यसकाे विवाद करिब दुइ महिनासम्म चलिरह्याे । विभिन्न अडकलबाजिका विच हिजाे सर्वाेच्च अदालतले पुन मतदान गर्न भनि निर्णय सुनाएकाे छ ।
सवाेच्चकाे फैसलापछि पुन मतदानका पक्ष विपक्षमा टिकाटिप्पणी शूरू भएका छन । विशेषत पुन मतदानकाे विपक्षमा देखिएकाे नेकपा एमाले निकट नेता कार्यकताहरू खराे रूपमा प्रस्तुत भएका छन । उनीहरूले सर्वाेच्चकाे फैसला विभेदपुर्ण र अपराधिलाइ प्रसय दिने भएकाे टिप्पणी गरेका छन ।
यस फैसलाबाट माअाेबादी केन्द्रमा खुसियाली छाएता पनि समग्रमा जनता भने निराश नै देखिन्छन ।
अब सर्वाेच्चकाे फैसलासँग भरतपुर १९ मा पुन मतदान कहिले हुन्छ र कसले बाजी मार्छ भन्ने विषय चासाेकाे विषय बनेकाे छ ।
Most Popular and Liked Posts, Articles
Name list of 75 Districts and their Headquaters of Nepal
1. Bhaktapur District (Bhaktapur) 2. Dhading District (Dhading Besi) 3. Kathmandu District (Kathmandu) 4. Kavrepalanchok District (Dhulik...
Kathmandu - The city of pollution and Traffic Jam
Kathmandu is the capital and largest city of Nepal. The city is situated in kathmandu valley that also contains two other cities - Pata...
Google+ (google Plus) In Nepal
Nepali social networking sites users are eager to know about the google's latest social networking site Google+ after the failure of pre...
'THE MOTHERLAND' First daily English newspaper of Nepal to come out in morning
SOME POINTS ABOUT 'THE MOTHERLAND' • Founded in January 1958 • Survived for as long as 15 years • First daily newspa...
"THE COMMONER'- First Daily English newspaper of Nepal
"THE COMMONER" is the first daily english newspaper of Nepal which was published in the editorship of Gopal Das shrestha. SOME PO...
Useful and Inspirational Blogs
यसकारण बार्नु पर्दैन मलामास - बिक्रम संवतको आधारमा गणना हुने पात्रोमा हरेक दुई बर्ष र केही महिनाको अन्तरालमा एकै महिनामा दुइवटा औँसी पर्ने गर्दछन । जसलाइ पन्चांगहरुमा अधिकमास र बोलीचाल...
Adhikhola Bridge (pool) Syangza,: photos -
Radio Sagarmatha: first independent community radio of Asia - Established in 1997, Radio Sagarmatha is the first independent community broadcasting station in South Asia. Broadcasting daily from the center of the Ka...
भरतपुर काण्डमा सर्वाेच्चकाे फैसला, कतै निराशा त कत...